अन्डालाइ यसरी खानु बढी स्वास्थ्यकर मानिन्छ, जान्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
पछिल्ला केही वर्ष यता नेपाली भान्सामा पनि अन्डा लगभग दैनिक पाक्ने गरेको छ । ब्रेकफास्टमा त अन्डा नछुटाउने धेरै भइसकेका छन् । तर, अन्डा खाने तरिका भने फरकफरक छन् । कतिले अन्डालाई फ्राइ गरेर अम्लेट बनाएर खान्छन् त कतिले उसिनेको अन्डा प्रिफर गर्छन् ।तर, पछिल्लो समय गरिएका अनुसन्धानले फ्राइ गरेर भन्दा अन्डा उसिनेर खानु स्वास्थ्यकर हुने पत्ता लगाएका छन् ।
दैनिक दुई वटा अन्डा उसिनेर खाँदा हुने फाइदाबारे विभिन्न अनुसन्धानले पत्ता लगाएका छ:उसिनेको अन्डामा भिटामिन बी–१२ तथा कोलिन हुन्छ । यी दुवैले स्मरण शक्ति बढाउन ठूलो सहयोग पुर्याउँछ । त्यसैले दैनिक अन्डा खाने मान्छेको स्मरण शक्ति बलियो हुने अनुसन्धानमा पत्ता लागेको छ ।
कपाल झरेर हैरान भएकालाई पनि उसिनेको अन्डाले धेरै फाइदा पुर्याउँछ । उसिनेको अन्डामा ल्युटिनको मात्रा अधिक हुने भएकाले कपाल झर्ने समस्या हुनेले यसको सेवन गर्नु राम्रो हुने अनुसन्धानकर्ताले जनाएका छन् ।सुख्खा छाला भएकालाई पनि उसिनेको अन्डा फाइदाजनक हुन्छ । उसिनेको अन्डामा बायोटिन हुने भएकाले यसले छालालाई नरम र चम्किलो बनाउँछ ।
एनिमियाबाट कसैलाई समस्या भएको छ भने पनि उसिनेको अन्डा सेवन गर्दा धेरै फाइदा पुग्छ । उसिनेको अन्डामा पर्याप्त मात्रामा आइरन पाइने भएकाले रक्तअल्पताको समस्या भएकालाई उसिनेको अन्डा खाने सल्लाह चिकित्सक दिन्छन् ।हाडजोर्नीमा समस्या भएकालाई पनि उसिनेको अन्डा फाइदाजनक हुन्छ ।
भिटामिन डिको मात्रा पर्याप्त हुने भएकाले उसिनेको अन्डाले जोर्नीको दुखाइलाई घटाउँछ ।अन्डामा फोस्फोरसको मात्रा पनि अधिक हुन्छ । यसले दाँत र हड्डीलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्छ ।अन्डामा भिटामिन ए पनि पाइन्छ । भिटामिन ए पर्याप्तमात्रामा भएकाले उसिनेको अन्डा सेवन गर्नाले आँखाको समस्या भएकालाई पनि धेरै फाइदा पुग्छ । यसले आँखालाई तेजिलो पनि बनाउँछ ।
उसिनेको अन्डामा फोलिक एसिड पनि पर्याप्त मात्रामा पाइनछ । फोलिक एसिडले क्यान्सरबाट बच्न सहयोग पुर्याउँछ । त्यसैले, उसिनेको अन्डालाई दैनिक प्रयोग गर्न सुझाइन्छ ।उसिनेको अन्डाले मस्तिष्कघात तथा हृदयघात हुने सम्भावनालाई पनि न्यूनीकरण गर्छ ।पर्याप्तमात्रामा एमिनो एसिड पाइने भएकाले उसिनेको अन्डाले ‘स्टामिना’ बढाउन पनि सहयोग गर्छ ।
रगतमा विभिन्न कोषिकाहरु हुन्छन् । यसलाई हामी आर.वि.सी. र डब्लु.वि.सी. भन्छौ । रगतको कोषिकाहरुमा हुने क्याक्सर नै ब्लड क्यान्सर हो । तर, धेरै मानिसलाई ब्लड क्यान्सर र बोनम्यारो क्यान्सर भिन्दाभिन्दै हो भन्ने कन्फयुजन छ । खासमा ब्लड र बोनम्यारो क्यान्सर भनेको एउटै हो ।
रातो रक्तकोष अनियन्त्रित तवरले बढ्यो भने आर.वि.सी.को भोलुम (आयतन) बढ्छ । अर्थात आर.वि.सी. र डब्लु.वि.सी. बढ्नु क्यान्सर हो । त्यससंगै प्लेटलेट बढे पनि क्यान्सर हो । तर सबै क्यान्सर रगतबाट नदेखिन पनि सक्छ । कतिपय क्यान्सर बोनम्यारोबाट पनि जाँच्नुपर्ने हुन्छ । समग्रमा भन्दा रगतको कोषिका अनियन्त्रित तवरले रगतमा बढेमा त्यसलाई रगत क्यान्सर भन्छौ ।
क्यान्सरले ज्यान लिन्छ । चाहे तपाइँ धनी हुनुहोस् या गरिव । हुने खाने होस वा हुँदा खाने क्यान्सरले छोड्दैन । तर क्यान्सरको शुरुवाती कालमा चाल पाइयो भने आफूलाई बचाउँन सकिन्छ । तर सामान्यतः अधिकाँश मानिसले यस्ता शुरुवाती लक्षणलाई वेवास्ता गर्ने गर्छन्।हुनत यो बढाइचढाइ जस्तो पनि लाग्न सक्छ । विज्ञहरुका अनुसार क्यान्सरको शुरुवातीकालमा निम्न लक्षण देखिन्छन् ।
Don't Miss it आलुको बोक्रालाई यति गरे असाध्यै फाइदा गर्छ स्वास्थ्यमा, के तपाईलाई थाहा छ ?
Up Next के तपाई दिमागमा धेरै कुराहरू खेलेर तनावमा हुनुहुन्छ ? यसरी छुटकारा पाउनुहाेस्